Home News Ciidanka Barta-Koontoroolada Joogo Xadgudub Badanaa!!! Markii Loo Daboolay Wajiga ayaa, Malaha, Loo...
Ciidanka Barta-Koontoroolada Joogo Xadgudub Badanaa!!! Markii Loo Daboolay Wajiga ayaa, Malaha, Loo Sahlay Iney Ku Xadgudbi Karaan Shacabka.
Salaaddii Subax markaan kasoo baxay saaka ayaa, anigoo u degdegsan isbitaalka oo aan kala balansanaa Dhaqtar, waxaan si degdeg ah kusoo raacay mooto bajaaj, si aan u gaaro Digfeer. Markaan soo gaarnay Barta Koontorool ee Sey Biyaano waxaan kula kulanay mooto naga sii horeysay oo uu askari wajiga u daboolan ku dhegan yahay wiil Lehjadda Maay-ga ku hadlaya, oo ay isfahmi la’yihiin. Wuu dharbaaxaa, caayaa, yiraa fadhiiso, istaag. Mootadii uu saarnaa, oo ay dad kale oo ay wada socdeen ay la saarnaayeen, ayuu dhawr mar damcay inuu ka reebto—intaas wiilka waxaa ku socda xadgudub jir ahaaneed iyo mid maskax ahaaneed. Ugu dambeyntii, wuu fasaxay.
Markii nala soo gaaray ayuu igu yiri “soo deg”. Saa waan soo degay. Wuxuu ii raaciyey “shaatiga kor u qaad”. Waan yeelay. Ugu dambeyntii, wuxuu Bajaajlihii ku yiri “soco”. Intuusan dhaqaaqin baan weydiiyey taliyihii sababta uu iila haray. Intuu ii indha gaduudiyey buu igu yiri “Maarsha Biyeediga salka dhigo oo fadhiiso”. Waan ku celiyey, oo waxaan iri “haddaad ii sheegto sababta aad igu haysato waxaan kuu sheegi karaa qofka aan ahay ee askari ii sheeg sida ay wax u jiraan”. Intuu qoriga ammaanka u furtay, afkiisana igu soo fiiqay ayuu si kulul iigu amray inaan yeelo waxa uu igu yiri, haddii kale uu xabadka dhulka ii dhigi doono.
Inaan Maarsha Biyeediga fadhiisto wey igu adkaatay—wasaqdiisa iyo iney meeshu tahay fagaare (public) darteed. Gidaarka Isbitaalka Banaadir ayaan aaday xagiisa, anigoo taaganna aan ku dangiigsaday. Markaan fahmay inuu rabo inuu i ciqaabo ayaan is iri “bal askari kale, oo ay isla joogaan, la hadal” saa waanba ka nuuxsan waayey. Haddaan dhaqdhaqaaq yar sameeyaba qoriga ayuu igu soo taagaa. Waxaan yeelo ayaan garan waayey. Markii dambe, isagoo xoogaa yara mashquulsan ayaan cod dheer ku iri askari kale oo meesha fadhiyey “taliye makuu imaan karaa?”. Suu yiri “kaalay”.
Waan u imid, waxaana la wadaagay dareenkeyga iyo daruufteeda—”Isbitaal ayaan u degdegsanahay, mana fahamsani wuxuu askarigaan igu maagay” ayaan ku iri. Askarigii aan rabay inuu iga celiyo sxbkii (askariga kale) waxa uu ii galay cabaasho uu ka yahay soojeedkii xalay iyo inuu maalin iyo habeen taagan yahay qoraxda, inaguna aan iska raaxeesaneyno. Markuu wax ii qaban waayey, ayaan dib uga laabtay, teleefanna ku dalbaday caawin. Intuusan i soo gaarin qofkii aan caawinta ka dalbaday ayuu askarigii markaan u dhib sheegtay iiga cabtay shaqadiisa ii yeeray, wareysi kale kadibna igu yiri “bax”.
Nasiib wanaag markaan Isgoyska Banaadir soo gaaray ayaan markale arkay Bajaajlihii la iga reebtay, kaasoo i keenay isbitaalka. Wuxuu iiga sheekeeyey askariga dhibtaan kasoo sheekeeyey igula kacay, kaasoo uu ii sheegay inuu had iyo goor dhibo, cadaadiyo, uuna u geysto xadgudub nuucyo badan dadka gaadiidka saaran ee soo maraya barta uu joogo. Wuxuu ii sheegay inuu askarigaas ku haayo halis aysan kala kulmin askarta kale. Saasdaraadeed, aniga saakay waxaan u dhibtooday, oon qatar u galay askari go’aansaday inuu ku cayaaro damiirka, sharafka iyo magaca Soomaalinimada, dowladduna ay had iyo goor ku wardiyeeso inaan la shaqeeyo askariga sidaasiya.
Bal, maxay kula tahay adi?